အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၂၀) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 2, 2014 at 12:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၆၁။ before (adverb ကြိယာဝိသေသန) မတိုင်မီက။ ယခင်က။ အရင်က။
၁။ before အား ယခုအချိန်မတိုင်ခင် မည်သည့်အချိန် ‘at any time before now’ ကိုမဆိုရည်ညွှန်းရန်သုံးနိုင်သည်။ ၄င်းအား present perfect tense (have + past participle) နှင့်သုံးလေ့ရှိသည်။
Before အား “ယင်းမတိုင်ခင်” ‘before then’ သို့မဟုတ် အတိတ်ကမိမိပြောနေသည့်အချိန်မတိုင်ခင် ‘before the past time that we are talking about’. ကို ရည်ညွှန်းရန်လည်းသုံးနိုင်သည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် past perfect tense (had + past participle) နှင့်သုံးလေ့ရှိသည်။
She realized that she had seen him before.
သူ့ကို အရင်က မြင်ခဲ့ဖူးသည်ဟု သူမ သတိပြုမိသွားသည်။
၂။ three days before,ayear before,alongtime before ကဲ့သို့သောအသုံးများတွင် “ယင်းမတိုင်ခင်” ‘before then’ အနေနှင့် past perfect tense တွင်သုံးသည်။
When l went back to the school that l had left eight years before, everything was different.
အရင်ရှစ်နှစ်တာကာလက စွန့်ခွာခဲ့သည့် ကျောင်းကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့ အရာရာသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ။
၆၂။ before (conjunction သမ္ဗန္ဓ၊ စကားဆက်) -ခင်၊ မပြုခင်၊ မဖြစ်ခင်
clause + before + clause
before + clause, + clause
၁။ before အား clause နှစ်ခုအားချိတ်ဆက်ရာတွင်သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာ- “ အေ သည် ဘီ မဖြစ်ခင် အရင်ဖြစ်သည် A happened before B happened” သို့မဟုတ် “ဘီမဖြစ်ခင် အေ အရင် ဖြစ်သည် Before B happened, A happened.” အဓိပ္ပါယ်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
*** Before ကိုရှေ့မှာထားရေးလျှင် “ကော်မာ ,” ပါသည်ကို သတိပြုပါ။
l boughtalot of new clothes before I went to America.
အ၀တ်အစားသစ်များစွာ အမေရိကမသွားခင် ၀ယ်ခဲ့သည်။
Before I went to America, l boughtalot of new clothes.
အမေရိကမသွားခင် အ၀တ်အစားသစ်များစွာ ၀ယ်ခဲ့သည်။
He did military service before he went to university. ( = He did military service first.)
တက္ကသိုလ်မတက်ခင် စစ်မှုထမ်းခဲ့သည်။ (စစ်မှုထမ်းတာကအရင်ဖြစ်)
Before he did military service, he went to university. ( = He went to university first.)
စစ်မှုမထမ်းခင် တက္ကသိုလ်တက်ခဲ့သည်။ (တက္ကသိုလ်တက်တာကအရင်ဖြစ်)
၂။ before clause တွင် အနာဂါတ်ကိုရည်ညွှန်းပါက present tense ကိုသုံးသည်။
I’ll telephone you before you leave.' (NOT before you will leave.)
၃။ အခန့်သုံးပြောဟန် ရေးဟန် (formal style) တွင် before + -ing ပုံစံအား သုံးတတ်သည်။
Please put out all lights before leaving the office.
ရုံးမဆင်းမီ မီးအားလုံးအား ပိတ်ခဲ့ပါ။
Before beginning the book, he spent five years on research.
စာအုပ် စ မရေးခင် သူမသည် သုတေသန ငါးနှစ်ကြာမျှလုပ်ခဲ့သည်။
၆၃။ before (preposition ၀ိဘတ်) မတိုင်ခင်။ မတိုင်မီ။ နှင့် in front of အရှေ့တွင်
in front of: place
I must move my car before nine o’clock.
ကားကို ကိုးနာရီ မတိုင်ခင် ရွှေ့ရမယ်။
It’s parked in front of the post office.
ကားက စာတိုက်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတယ်။
in front of သည် တစ်ခုခု၏ မျက်နှာမူရာအရှေ့ဘက်အနေနှင့်သာသုံးသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် လမ်း/မြစ်/ အခန်း စသည်၏ဟိုဘက်ဒီဘက် အနေနှင့်မသုံးပါ။
There ’sapub opposite my house. (NOT . . . in front of my house )
ကျွန်တော့်အိမ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိသည်။
We stood facing each other across the train. (NOT . . . in front of each other)
ကျွန်တော်တို့ ရထားပေါ်တွင် အချင်းချင်း မျက်နှာမူလျက်ထိုင်ကြသည်။
၆၄။ begin and start စတင်သည်
၁။ begin နှင့် start တွင် အဓိပ္ပါယ်အထွေအထူး ကွာခြားမှုမရှိပါ။
I started/began teaching when I was twenty-four.
ကျွန်တော့်အသက် ၂၄ နှစ်တွင် စာ စသင်ခဲ့သည်။
If John doesn’t come soon, let’s start/begin without him.
ခဏကြာလို့ ဂျွန်မလာရင် သူမပါဘဲ စကြစို့။
အစနှင့်အဆုံး ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိသည့်အရာ၊ အလေ့အထများကိုပြောရန် start ကိုသုံးလေ့ရှိသည်။
What time do you start teaching tomorrow morning?
မနက်ဖြန်ဘယ်အချိန် စာ စသင်မှာလဲ။
ရှည်ကြာသည့်၊ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုလုပ်ရသည့် ကိစ္စများတွင် begin အားပိုသုံးလေ့ရှိသည်။ formal style တွင်လည်းသုံးသည်။
Very slowly, I began to realize that there was something wrong.
တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဘာမှမမှားခဲ့ဟု သတိပြုမိလာခဲ့သည်။
We will begin the meeting withamessage from the President.
သမ္မတထံမှ သတင်းစကားဖြင့် အစည်းအဝေးအား စတင်ပါမည်။
၂။ Start (but not begin) အား
(က) ခရီးတစ်ခုစတင်ရန် ‘startajourney’
လမ်းရှင်းသည့်အချိန် ခြောက်နာရီလောက် ခရီးစ သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
(ခ) စက်ယန္တရားတစ်ခု စတင်အလုပ်လုပ်သည် ‘start working’ (for machines)
(ဂ) စက်ယန္တရားတစ်ခု စတင်ရန် ‘make (machines) start’
အ၀တ်လျှော်စက်ကို ဘယ်လို စလုပ်ရမလဲ။
Permalink Reply by သူခိုးလေး ချမ်းမြေ့ on July 5, 2014 at 3:22
အခြေခံ အသုံး Post တွေကို